Indlela yokuthumela kwi-Instagram Stories Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungathumela njani kwiimbali ze-Instagram
NgoJanuwari 31, 2019 0 IiCententarios 972
Iinethiwekhi zentlalo zinike a bhukuqa ngokupheleleyo Kwisizukulwana sangoku. Kwaye, banabantu abangamakhoboka aphambili. Ukuthetha ngendlela elungileyo, rhoqo ukusebenzisa kwabo kubenze bafana neendlela eziphambili zonxibelelwano phakathi kwabantu. Enye yezona zisetyenziswayo namhlanje liqonga le-Instagram. Yeyiphi ngaphezulu kwe-600 yezigidi zabasebenzisi Uluhlu lwezixhobo kunye nokhetho olwenza ukuba lubonakale ebantwini. Esona sixhobo sinomtsalane senethiwekhi eyabiziweyo siyaziwa Amabali e-Instagram. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi namhlanje bezibuza ukuba angapapasha njani kumaBali e-Instagram.
Kule mihla, baninzi abasebenzisi abasebenzisa a isixhobo esinobuchule njenge Instagram Amabali Ezi ziyafumaneka kuye nawuphi na umsebenzisi weqonga onqwenela ukuzisebenzisa. Iimbali ze-Instagram ezihlaziyiweyo zinemvelaphi eyaqala emva kwi5 kwiminyaka eyadlulayo. Kwaye indalo yayo iza ngenxa yochungechunge lokucingisisa kwinxalenye yeenkqubo kubasebenzisi. Phakathi kwayo okubonakalayo, ukukwazi ukupapasha ngokungazinzisi Ngaphandle kokulayisha iiprofayile zakho Iifoto ngamanye amaxesha ezingafunekiyo.
Kutheni usithumela kumabali e-Instagram?
Isizathu sokuba uthumele kwi-Instagram ibali kufuneka zahluka rhoqo. Kungenxa yokuba umsebenzisi ngamnye unokuba nezizathu ezahlukeneyo. Kwaye unokongeza inyani yokuba kukho umgca wokwahlula phakathi kweenjongo zabasebenzisi abaneeakhawunti zakho kunye nezeshishini. Ukusukela injongo ye umvuzo kunye nentengiso Iakhawunti yeshishini iya kukhokelela amashishini kunye neenkampani ukuba zisebenzise isixhobo sebali le-Instagram yeqonga. Sikwaxelele nokuba wazi njani ngubani oyekayo ukukulandela kwi-Instagram.
Umsebenzisi kufuneka akwazi ukuziva ngathi uthumela amanqaku kwi-Instagram ye ixesha elifutshane onayo. Ngokuqinisekileyo, ngokuthumela umntu uya kuvumela izimvo ezivela kubalandeli babo. Nangona kunjalo, xa usebenzisa amabali, upapasho olwenziweyo luya kuba nexesha elilinganiselweyo Iiyure ze-24. Ke ngenye imini emva kokuba uyithumele, iya kuba ingasekho.
Amabali e-Instagram asisixhobo esiluncedo kakhulu. ziluncedo kwaye azinamda. Xa uyisebenzisa, umsebenzisi unokupapasha into ayifunayo amaxesha ngamaxesha ngendlela afuna ngayo. Ukongeza, ukubhenela kuyo kulele kwinto yokuba benganyanzelekanga ukuba balayishe ngaphezulu ukudla. Oko kukuthi, nokuba umsebenzisi uthumela amabali yonke imihla, iprofayile yakhe kufuneka ihlale izinzile ngaphandle Ulwazi oluninzi.
Iqonga le-Instagram kufuneka livumele abasebenzisi ukuba baphuhlise zabo ubuchule. Kungenxa yoko le nto, ngaphambi kokuzalwa kwesixhobo seMbali ye-Instagram, abanye abahleli bazisiwe. Ngale ndlela, ngokunqwenela ukupapasha ibali, umsebenzisi unakho Yenza ngokwezifiso ukuthanda kwakho. Kananjalo iya kuba noluhlu lweefilitha, ii-emojis kunye nezitikha ezahlukeneyo ezinokongezwa ebalini.
Iinkampani ezininzi kunye neenkampani ezisebenzisa kwimakethi yedijithali Kuya kufuneka basebenzise amabali e-Instagram. Oku, ukwenzela ukuba iprofayili yakho ibe namandla ngakumbi kubasebenzisi kunye nabathengi abanokubakho. Ukongeza, ngale ndlela, ishishini kufuneka likwazi ukwandisa ukuthengisa kunye nokufikelela kwi Umthengi omtsha
Iintengiso ze-Instagram Storia, sisixhobo esize nayo iqonga lakutshanje. Ngayo, kukho iinkampani ezininzi ezifikelele kwi intengiso ephumelelayo Kuba iya kuzisa kunye nayo, iinkcazo kunye nokufikelela okukhulu kwimarike. Ukongeza, ukuluncedo kwayo akuthandabuzeki kwaye iindleko zayo zincitshiswe kakhulu. Ke yeyona ndlela ilungileyo yokufezekiswa ukuthengisa kwidijithali
Unokuba nomdla buyisela kwakhona i-password ye-Instagram.
Ungathumela njani kwiimbali ze-Instagram?
Esi sixhobo sinomdla, amaNqaku e-Instagram, kulula ukusisebenzisa nawuphi na umsebenzisi Kuya kufuneka akwazi ukuyisebenzisa. Ngokwazi nje amanyathelo alula, umntu lowo angenza kwaye apapashe ii-c zaboubuchule bokuyila Ngenethiwekhi. Ngale ndlela, umsebenzisi ngamnye kufuneka akwazi ukwenza ngokwezifiso amabali abo ngaphambi kokuwapapasha, kwaye ke asete umkhwa.
Inyathelo lokuqala lokupapasha kumabali e-Instagram kufuneka ube ukufikelela. Ke umsebenzisi kufuneka avule isicelo kwaye ufake idatha yabo. Oku kufuneka kube sisidlaliso sakho okanye igama lomsebenzisi, Nditsho ne-imeyile yakho ebhalisiweyo. Kwaye kufuneka ufake iphasiwedi ehambelana nayo. Nje ukuba ufikelele isicelo, isikrini sokuqala esiya kuboniswa iya kuba se qala.
Umsebenzisi kufuneka acofe kwi icon kunye imilo yekhamera ibekwe ngasentla kwesikrini. Ngale ndlela uya kuba ufake isixhobo seMbali ye-Instagram ukongeza isithuba esitsha. Enye indlela esebenzayo kakhulu yokwenza "Skrolela" ngasekunene, oko kukuthi, kufuneka usilayite isikrini uye kwicala lasekunene.
Emva kokungena kwiBali ze-Instagram, umsebenzisi unokuthatha ifoto oyifunayo. Ukongeza, ukuba sele ligcinwe kwigalari okanye kwifolda enefoto ungayisebenzisa. Ukwenza oku, kufuneka uswayipe, kwaye imifanekiso nganye kunye neevidiyo kwilayibrari ziya kubonakala zilandelelana ukusuka kwelona lidala nelidala. Ke kufuneka nje khetha nayiphi na kuzo.
Emva kokukhetha ifayile, umsebenzisi unokuhombisa okanye abhale emfanekisweni. Ukwenza oku, kufuneka ukhethe enye yeempawu ezifunyenwe kwibha ephezulu. Kwaye ke kufuneka ubenakho ukubona imbonakalo nganye eyahlukeneyo emojis kunye nezitikha ezikhoyo.
Emva kokuba ugqibe umhlobiso, kuya kufuneka cofa apha iposti Oku kubonisa imenyu apho ukhetho luza kuvela khona. Olunye ukhetho luza kuthi "Yongeza kwibali lam", ngelixa ezinye ziya kuthunyelwa yi-MD. Kuya kufuneka ukhethe eyokuqala kwaye ucofe kwithebhu yokushicilela. Ngale ndlela, umsebenzisi uye iphumelele impumelelo kwinjongo yokuthumela kumabali e-Instagram.
Siyakuxelela indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
1 Amabali e-Instagram
2 Kutheni usithumela kumabali e-Instagram?
3 Ungathumela njani kwiimbali ze-Instagram?
NgoJanuwari 30, 2019
Ngena kwi-Instagram ngaphandle kwephasiwedi
NgoJanuwari 31, 2019
Ungathumela njani kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac